पर्यटन क्षेत्र मार्फत वृहद सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने योजनामा दर्शन लुम्बिनी कम्पनी-Setoghar
पर्यटन क्षेत्र मार्फत वृहद सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने योजनामा दर्शन लुम्बिनी कम्पनी
हाल बुटबलको बसपार्क पछाडि लब्ली होटल एण्ड गेष्ट हाउस सञ्चालनमा ल्याएको दर्शन लुम्बिनी कम्पनी वृहद योजनाको साथ अघी बढिरहेको छ । हाल यस कम्पनीमा रुपन्देहीमा रही विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न टीकाराम पन्थी, राम प्रसाद गौतम, सन्तोषमानसिंह श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद नेपाल लगायतका व्यक्तिहरुको लगानी रहेको छ ।
पर्यटन व्यवसायमा संलग्नता बारे सञ्चालक मध्येका एक कृष्ण प्रसाद नेपाल सँगको कुराकानीको क्रममा ऊहाँले नेपालमा पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना देखेको कारण अहिले आफूहरुले होटलको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको बताउनुभएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको निम्ति पहिलो पूर्वाधारको रुपमा नै होटल नै रहेको बताउँदै नेपालमा नै प्रयाप्त सम्भा
कृष्ण प्रसाद नेपाल सञ्चालक लब्ली होटल एण्ड गेष्ट हाउस दर्शन लुम्बिनी कम्पनी प्रा.लि
वनाहरु रहेको कुरालाई व्यावहारिक पक्षबाट पुष्टि गर्ने योजना बमोजिम आफूहरु केही जोखिमको साथ अघी बढेको बताउनुभएको छ । आफूहरु पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनशायमा लामो समय देखि नै भएपनि परिस्थिति अनुकुल बन्न नसकेको बताउँदै अहिले भने विचार मिल्दो टिम समेत संगठित भएर यस क्षेत्रमा अघी बढेको बताउनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा हामीले होटलका सञ्चालक तथा नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका कृष्ण प्रसाद नेपालसँग केही कुराकानी गरेका थियौं ।
तपाई त मदिरा व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति पर्यटनको क्षेत्रमा किन जोडिनुभयो ?
नेपालमा अहिले सम्म थोक तथा वितरकको रुपमा रही मदिराको कारोबार गर्दै आएकोमा अहिले सम्म हामीलाई मदिरा व्यवसायीको रुपमा नै हेर्ने गरिन्थ्यो । साथै मदिरा क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउनको निम्ति पनि मैले निकै ठूलो मेहनत गरेको छु । यत्तिले मात्र प्रयाप्त छैन । यसैकारण नेपालमा नयाँ क्षेत्रको रुपमा फस्टाउँदै गएको पर्यटनको क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने मान्यता बमोजिम हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं ।
हामीले लामो समय देखिको मेहनत पश्चात् भर्खर सामुहिक रुपमा यो व्यवसायमा शुरुवात भएका छौं । नेपालमा लगानी गर्नको निम्ति पर्यटन क्षेत्र एक उर्वर क्षेत्र हो । नेपालमा यस क्षेत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित समेत छ । केही चुनौतीहरु हरेक क्षेत्रमा आउँछन् नै । यद्यपि आइपर्ने हरेक समस्याहरु हामीले सामना गरेर नै अघी बढ्नेछौं ।
दर्शन लुम्बिनी कम्पनी अबको ५-७ बर्षमा कुन अवस्थामा हुनेछ ?
हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार हाम्रो यो दर्शन लुम्बिनी कम्पनी कम्पनीले कम्तीमा पनि एक बर्षमा एउटा व्यवसायी विस्तार गर्दै नेपालमा नयाँ सम्भावना खोजी गर्दै जाने योजनामा हामी छौं । प्रत्येक बर्ष यस कम्पनी अन्तरगत १५-२० जना जनशक्तिलाई थप रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने योजनामा समेत हामी छौं । शुरुवातमा हामीले सानो लगानीमा नै यो व्यवसाय शुरु गरेका भएपनि आगामी दिनमा यसलाई अझ गतिशिल बनाउँदै लैजानेछौं ।
आगामी बर्षको लागि योजना बनाइसक्नुभएको छ कि ?
हामी योजना बनाउने क्रममा छौं । नेपालमा व्यवसाय विस्तारको निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जमीन नै हो । उद्योग कलकारखाना खोल्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले जग्गाको नै आवश्यकता रहन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसले गर्दा नेपालमा जग्गा लिज्डमा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो छ । यद्यपि हामीले आफैं नै जग्गा लिएर त्यहीँ नै आफूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । हामीले अब जग्गाको तयारीमा नै जोड दिएका छौं ।
हाम्रो यस टीममा कस्ता व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ ?
हाम्रो यस टीममा सबै व्यावसायिक क्षेत्रका जागरुक व्यक्तिहरु नै हुनुहुन्छ । नेपालमा नै राम्रो सम्भावना देखेका व्यक्तिहरुको सामुहिक लगानीमा यो क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेर व्यवसायी गर्दै आउनुभएका र नेपालमा व्यवसाय गर्ने क्रममा लामो अनुभव समेट्नुभएका व्यक्तिहरु नै यस कम्पनीमा आवद्ध भएको कारण नेपालमा हामीले हाम्रो यस कम्पनीले राम्रो तवरले काम गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाइरहँदा व्यावसायिक व्यक्तिहरु मात्र संलग्न रहेको अवस्थामा आउन सक्ने जोखिम बारे त जानकार हुनुहुन्छ होला नि ?
नेपालमा टे«डिङ व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्र निकै फरक क्षेत्र हुन् । यद्यपि नेपालमा लगानी गर्ने क्रममा यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरुले दुढ अठोटको साथ अघी बढ्दा उद्योग क्षेत्रमा सफल हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसै बमोजिम हामी पनि उद्योगको क्षेत्रमा अघी बढेका छौं ।
ललितपुरकाे शुज पार्कमा जुत्ता एक्सचेन्ज मेला
ढुक्क हुनुस्, हाम्रो विजय सुनिश्चित छ : डा त्रिरत्न बज्राचार्य
युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष काम गर्दै आएको छु : वराल